San Htun's Diary: ပရင့်စတန်သွား တောလား - ၂
ခြံထဲမှာ ပန်းသီးစားခွင့် မပြုဘူးဆိုပေမဲ့ Security ကင်မရာ၊ လုံခြုံရေးအစောင့်ရှိတာမှ မဟုတ်တာ စားလည်း သူတို့ မသိနိုင်ပါဘူးလို့ဂိုက်ကပြောတော့ အားလုံးပွဲကျတယ်။ ခြံထဲရောက်တော့ မြေပုံတစ်ခု၊ စက္ကူအိတ်တစ်လုံး ရတယ်။ မြေပုံက ဟိုးနောက်ဖက်ကိုသွား ဘယ်အတန်း၊ ဘယ်မျိုးတွေလို့ညွှန်းထားတဲ့ စာရွက်ပါ။ ပန်းသီးအမှည့်တွေနား မရောက်ခင် အစိမ်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ ဖူဂျီမျိုးအမှည့်ခင်းရောက်တော့ ပန်းသီးတောင် သိပ်မရှိဘူး။ ပန်းသီးကို လှည့်လိုက်လို့အညှာကနေ ကျွှတ်လာရင် မှည့်တယ်။ မနေနိုင်တဲ့ ကိုယ်က ဖူဂျီတစ်လုံး မြည်းကြည့်တော့ အားပါးပါး ကောင်းလိုက်တာ။ အောက်မှာ ကြွေကျနေတာတွေက နှမြောစရာ။ အပင်ပေါ်မှာက မမှည့်သေးတာရယ်၊ ပိုးထိုး၊ ငှက်စားထားတဲ့ အသီးတွေ။ ဖူဂျီမဟုတ်တဲ့ တခြားခင်းက ပန်းသီးတွေ ခူးတယ်။ ပန်းသီးနီနီတွေများများ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ကောင်းမဲ့နေရာတွေဆိုရင် ဝိုင်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာ ဆိုတာများ ပန်းသီးခူးရဖို့ ထက် ပန်းသီးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရဖို့ က အရေးကြီးတယ်။ ပန်းသီးကို ဝိတ်ချိန်၊ ပိုက်ဆံရှင်းတဲ့နေရာမှာ ဖူဂျီပန်းသီးက ဘာလို့ နည်းနေရတာလဲမေးတော့ လူတိုင်း အဲဒီလို မေးကြတယ်တဲ့ ဖူဂျီပန်းသီးရာသီက အောက်တိုဘာလတဲ့။ အောက်တိုဘာမှာ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာရမဲ့ပုံပဲ။ ပေးထားတဲ့ ၁ နာရီ အချိန်စေ့လို့ကားပေါ်ရောက်တော့ နောက်ကျတတ်တဲ့ တရုတ်ကလေးတွေ ဒီတခါတော့ အချိန်မှန်သား။
ကိုယ်က ဆန်းဒွက်စ်၊ ဖရဲသီးဖျော်ရည်၊ ဘွတ်စကွတ်မုန့်စားနပ်ရိက္ခာအပြည့်အစုံနဲ့ချီတက်လာပေမဲ့ နေ့ လည်စာကို မက်ဒေါနယ်ဆိုင်မှာ စားမယ်လို့ဂိုက်ကပြောတာ့ မစားဘဲ အလကားထိုင်၊ အိမ်သာဝင်ရမှာ အားနာစရာကြီး ဝိုင်းတို့ တခုခုဝယ်ပြီး နှစ်ယောက်ရှယ်ရအောင်တဲ့။ Nugget chickens ၂၀ ဝယ်လိုက်တယ်။ ဝိုင်းနဲ့ ကိုယ်က Coke အအေးတွေ မကြိုက်တာ တူတယ်။ ကိုယ်ကတောင် Green tea ၊ Starbucks က Vanilla Latte သောက်သေးတယ်။ ဝိုင်းက ခရီးသွားရင် ရေတောင် သိပ်မသောက်ဘူး။ သိပ်မသောက်တော့ သိပ်မပေါက်ဘူးပေါ့ဟ။ အင်း...ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ အလုပ်ထဲမှာ Stress များရင် သောက်လိုက်၊ ပေါက်လိုက်၊ နင်းကန်စားလိုက်နဲ့ ။ ကိုယ် မက်ဒေါနယ်ဆိုင် မထိုင်တာ အတော်ကြာပြီ။ ကျောင်းက အစားအသောက်တွေ စားမကောင်းရင် ဘူဖေးကျတော့ ဈေးကြီးလို့အပတ်တိုင်း သွားမစားနိုင်။ အမြဲစားတာ မက်ဒေါနယ်က ၂ ကျပ်တန် မက်ခ့်ချစ်ကင်း ဘာဂါ။ ကျောင်းက ထွက်လာပြီးကတည်းက မက်ဒေါနယ် မစားတော့တာ။ ဟား ...ဟား one year is enough ဆိုပါတော့ exactly ။
ဒီနေ့ ခရီးစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် လန်ကတ်စတာမြို့လင်ကွန်းဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်က Amish Farm and House ကို မိုင် ၁၀၀၊ ၂ နာရီသာသာ မောင်းရပါတယ်။ ဝင်ကြေးက ၂၀ ပါ။ အိမ်အလည်က ထိုင်ခုံတွေမှာ ထိုင်ခိုင်ပြီး ဂိုက်အန်တီကြီး ရှင်းပြတာက ဒီလယ်ယာတောကို ပန်ဆယ်ဗေးနီးယား တည်ထောင်သူ ဝီလီယံပန်က ကိုလိုနီယမ်မြို့ တော်ဝန် ဂျွှန်အမ်ဗန်ကို ၁၇၁၅ မှာ ပေးခဲ့ပြီး အမ်ဗန်မျိုးဆက်တွေက ဒီအိမ်ကို ၁၈၀၅ ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တော့ အိမ်ရဲ့ သက်တမ်းက ၂၀၀ ကျော်ပါပြီ။ မျိုးဆက် ၇ ဆက်ရဲ့အိမ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လန်ကက်စတာကောင်တီရဲ့first tourist attraction ဖြစ်လာပြီး လန်ကက်စတာကောင်တီအကြောင်း သိစေခဲ့တာပါ။ ၁၉ ၅၅ ကတော့ လန်ကက်စတာကောင်တီရဲ့ခရီးသွားနှစ်လို့ဆိုရမယ်။ ၁၉ ၅၄ မှာ အန်းမစ်ခ်ျတွေအကြောင်း တင်ဆက်ပြသတဲ့ Plain and Fancy ပြဇာတ် ဘရော့ဝေးမှာ ဟစ်ဖြစ်တော့ လူတွေက အန်းမစ်ခ်ျတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့သွားရောက်လာပတ်ကြတာ တနှစ်ကို လူနှစ်သောင်းကျော် လာရောက်လည်ပတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။
၁၉ ၅၅ မှာ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်က သူ့ ဆိုင်နားက ၂၅ ဧက လယ်တောအိမ်ကို ဝယ်ပြီး Amish Farm and House ဆိုပြီး ဖွင့်လှစ်ကာ အန်းမစ်ခ်ျတွေ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်တယ်ဆိုတာ အများပြည်သူကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျတွေရဲ့မူလအစက ဆွဇ်ဂျာမန်ဖက်ကပါ။ ဂျက်ကော့အာမန်နောက်လိုက်တွေကို အန်းမစ်ခ်ျတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျတွေဟာ လျှပ်စစ်ဓာတ်မသုံး၊ ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းတွေမသုံး၊ အဝတ်အထည်ဆိုရင်လည်း ပြောင်တွေဝတ်ပြီး ရိုးရိုးစင်းစင်း နေထိုင်ကြပါတယ်။ ၁၈ရာစုမှတော့ အန်းမစ်ခ်ျတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပင်စန်ဗေးနီးယားကို ပြောင်းရွှေ့ လာကြပါတယ်။ သူတို့ ဘာသာစကားကတော့ ပန်စယ်ဗေးနီးယားဒက်ခ်ျလို့ခေါ်ကြတဲ့ ဂျာမန်စကားတစ်မျိုးပါ။ အန်းမစ်ခ်ျတွေမှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမရှိဘဲ အိမ်တွေမှာ အလှည့်ကျ ဝတ်ပြုကြပါတယ်။ ကက်ဆက်ဖွင့်ပြပြီး အန်းမစ်ခ်ျတွေ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သံ နားထောင်ခိုင်းတယ်။ ဥုံလို့ရွတ်နေသလိုပဲ။ Bible သမ္မာကျမ်းစာက ဂျာမန်လို ရေးထားတာပါ။
နွေရာသီအတွက် လေအေးပေးစက်၊ ဆောင်းရာသီအတွက် အပူပေးစက် အန်းမစ်ခ်ျအိမ်တွေမှာ မရှိဘူး။ ဓာတ်ကြိုးဟာ အပြင်လောကနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်လို့ယူဆလို့အန်းမစ်ခ်ျအိမ်တွေမှာ လျှပ်စစ်သွယ်တဲ့ ဓာတ်ကြိုး၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်း မရှိဘူး။ ခုခေတ်အန်းမစ်ခ်ျလေးတွေကတော့ ဓာတ်ကြိုးတွေ သွယ်တန်းမထားတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးကြတယ်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိတော့ ဆိုလာပြားနဲ့ဖုန်းအားသွင်းကြတယ်။ တစ်နှစ်သား ကလေးဆိုရင် ယောက်ျား၊ မိန်းမ မရွေး အဝတ်တစ်မျိုးပဲ ဝတ်တယ်။ ကြယ်သီးတွေ မပါစေရ။ ယောက်ျားဆိုရင် ရှပ်အင်္ကျီ၊ ကြိုးသိုင်းထားတဲ့ ဘောင်းဘီ၊ နှီးဦးထုပ်၊ မုတ်ဆိတ်မွှေး ထားတယ်။ မိန်းကလေးဆိုရင် ဂါဝန်ပြောင်၊ ဆံပင်ကို အဖြူရောင် ပုဝါပါးလေး အုပ်ထားတယ်။ မွေးကတည်းက ဆံပင်မညှပ်တော့ဘဲ အရှည်ထားကြတယ်။ အပြာရောင်၊ အနက်ရောင် အများဆုံး ဝတ်ကြပေမဲ့ တခါတုန်းက အဝါရောင် ဝတ်ထားတဲ့ အန်းမစ်ခ်ျမလေး တွေ့ ဖူးပါသတဲ့။ ဂါဝန်နောက်ဖက်မှာ အတွန့် အလိမ်လေးတွေပါတဲ့ စတိုင်ဟာ ခု ခေတ်အစားဆုံး စတိုင်ပါတဲ့။
အန်းမစ်ခ်ျ မိန်းကလေးတွေဟာ မိတ်ကပ်မလိမ်း၊ ရတနာမဝတ်ဘူး။ အန်းမစ်ခ်ျတွေဟာ ဓာတ်ပုံလည်း မရို်က်ဘူးတဲ့။ ဒီတော့ အန်းမစ်ခ်ျတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် သူတို့ မျက်နှာမပါအောင် သတိထားပါတဲ့။ မီးဖိုကတော့ ပိုစီကလိမ်းသုံးတဲ့ မီးဖို (ပိုစီကလိမ်းဆိုတာ ဘာပါလိမ့်)။ ရေခဲသေတ္တာလည်း ရှိတယ် ပိုစီကလိမ်းသုံးတဲ့။ သခွားသီး၊ မုန်လာဥနီ အချည်တည်ထားတဲ့ ချောင်ချောင်လို့ ခေါ်ကြတဲ့ စားစရာတစ်မျိုးက နာမည်ကြီးတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျတွေက ကလေးတွေလည်း အများကြီးမွေးတော့ လူငါးယောက်၊ ခြောက်ယောက်စာအတွက် မနက်၊ နေ့ လည်၊ ညစာအတွက် ပြင်ဆင်ရမှာ မလွယ်ပါလား။ အဝတ်လျှော်စက်လည်း မသုံးတော့ အိမ်သားတွေရဲ့အဝတ်တွေကို လက်နဲ့ လျှော်ရမှာ တယ်မလွယ်ပါလား။ မောင်မောင်ဆို ငယ်ငယ်တုန်းက တနေ့ အင်္ကျီသုံးစုံ လဲရတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျနေအိမ်လေးက တကယ့်ကို ရှင်းရှင်းလေး နံရံမှာ တခုခု အလှဆင်ထားတာဆိုရင် အဲဒါ တခုခုသုံးဖို့ နေမှာတာ။ ခုလည်း နံရံပေါ်က ပန်းပွင့်လေးက အင်္ကျီချုပ်တဲ့အပ်တွေ ထားတာ။
အန်းမစ်ခ်ျတွေရဲ့အိမ်တွေတိုင်းမှာ ဒီလို အစိမ်းရောင်လိုက်ကာလေး တပ်ထားလေ့ရှိတယ်
တခါတလေ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ တီရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ အန်းမစ်ခ်ျလူငယ်လေးတွေ တွေ့ ရလိမ့်မယ်။ တီရှပ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်ထားပေမဲ့ ဆံပင်ပုံစံက အန်းမစ်ခ်ျလို့ပြောနေတာကိုး။ ၁၆ နှစ် မပြည့်ခင် အပြင်ဖက်ကို သွားလာခွင့်ပေးပြီး အန်းမစ်ခ်ျလုပ်မလား၊ အင်္ဂလိပ်လုပ်မလားလို့ရွေးခိုင်းတယ်။ အမေရိကန် လူဖြူလူမည်း၊ ဥရောပ၊ အာရှ၊ အာဖရိက ဘာလူမျိုး၊ ဘာအသားအရောင် ဖြစ်ပစေ အန်းမစ်ခ်ျမဟုတ်ရင် အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်ပါသတဲ့။ လန်ကက်စတာမှာတော့ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း အန်းမစ်ခ်ျ ပြန်လုပ်ကြတယ်။ ဝိုင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမ်းထရူးက အန်းမစ်ခ်ျတဲ့။ သူက အင်္ဂလိပ်လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာ။ အမ်းထရူး ဘား၊ ကလပ်တွေ ကြိုက်တော့ အန်းမစ်ခ်ျ မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့။ အန်းမစ်ခ်ျတွေဟာ အားလုံးရှစ်တန်းအထိပဲ ကျောင်းတက်ကြတယ်။ ပြီးရင် လယ်ယာလုပ်ကြတယ်။ ပြောင်းဖူး၊ ပဲတစ်မျိုး ၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ soy bean စိုက်ကြတယ်။ ကြက်၊ ငှက်၊ ဝက်၊ မြင်းပု၊ ဒေါင်း၊ ဆိတ်၊ သိုးတွေ မွေးထားတာ ကြည့်ပြီးတော့ လန်ကက်စတာတခွင် ကားပတ်မောင်းပြီး ဂိုက်အန်တီကြီးက မြင်သမျှ ရှင်းပြတယ်။
၁၇၉၁ မှာ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ လန်ကက်စတာ - ဖီလာဒဲဖီးယား turnpike ခု လင်ကွန်းဟိုင်းဝေး route ၃၀ က အမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံး paved ယာဉ်တွေမောင်းလို့ ရတဲ့လမ်းပါ။ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားမှာ ယဉ်ကြောအရှုပ်ဆုံးလမ်း ၃ နာရီလောက် အရှေ့ ဖက်ကို ဆက်မောင်းရင် မေရီလန်းပြည်နယ် အိုးရှင်းစီးတီး၊ အနောက်ဖက်ကို လေးရက်လောက် ဆက်မောင်းရင် အိုရင်ဂန်ပြည်နယ်ကို ရောက်တယ်။ ယဉ်ကြောရှုပ်လို့အန်းမစ်ခ်ျတွေ ဒီလမ်းကို ရှောင်ကြတယ်။ လမ်းတလျှောက်က အင်္ဂလိပ်၊ အန်းမစ်ခ်ျအိမ်တွေ ညွှန်ပြရင်း မိသားစုအကြောင်း၊ လုပ်ငန်းတွေအကြာင်း ရှင်းပြတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလုို့ကိုယ်တွေက ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်။ အင်္ဂလိပ်စကား နားမလည်တဲ့ တရုတ်တွေက တခေါခေါ အိပ်လို့ ။ ဒီနေ့အန်းမစ်ခ်ျတွေ အပြင်ထွက်လည်ကြတဲ့နေမို့တူပါရဲ့ဘက်ဂီမြင်းလှည်း buggy တွေ တော်တော်များများ တွေ့ တယ်။ ဘက်ဂီတွေ ဖြတ်သွားတိုင်းလည်း မြင်းလှည်းပေါ်မှာ ပါတာ လက်ထပ်ထားတဲ့စုံတွဲ၊ အပျိုမလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ် သိပါလိမ့်။ စက်ဘီးနဲ့ တူပေမဲ့ စကူတာလို ဖိနင်းရတဲ့ဟာကို အန်းမစ်တွေက Push and Go လို့ခေါ်ကြတယ်။
မကြာသေးခင် နှစ်တွေတုန်းက အန်းမစ်ခ်ျကျောင်းမှာ သေနတ်ပစ်မှု ဖြစ်သွားလို့ကလေးတွေ သေသွားတယ်။ အဲဒါဖြစ်ပြီးကတည်းက ကျောင်းတွေမှာ တယ်လီဖုန်းတွေ တပ်လိုက်တယ်။ ဘက်ဂီတွေနဲ့နောက်မှာ ရောင်ပြန်ပြားတွေ အစိုးရက မတပ်မနေရ တပ်ခိုင်းတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျတွေက ကားမရှိတော့ ကားမောင်လိုင်စင်၊ ကားမှတ်ပုံတင် မလိုဘူး။ အစိုးရရဲ့Socail Security ပင်စင် ၊ Medicare ကျန်းမာရေးစရိတ်တွေကိုလည်း မယုံတော့ ထည့်စရာ မလိုဘူး။ အန်းမစ်ခ်ျတွေက သူတို့ ဘာသာ စောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ လယ်ယာတွေကို အငယ်ဆုံးကို ပေးအပ်ပြီး အငယ်ဆုံးက မိဘတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျတွေရဲ့ဘဝက ရိုးစင်းတယ်။ JOY ဂျေ က Jesus အို က မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ဝိုင်ကို မရှင်းပြလိုက်နိုင်ဘူး ဂိုက်အန်တီက ကားလမ်းညွှန်နေရလို့ ။ အဲဒီအန်းမစ်ခ်ျအိမ်က အဘွားဆို အသက် ၈၉ နှစ်မှာ ဆုံးသွားတာ မြေး ၂၄ ယောက် သားသမီးမြေးမြစ် ၂၀၀ ကျော် ကျန်ခဲ့တယ် အိုးမိုင်ဂါ့ခ်ျ။ ဒါ့ကြောင့် အန်းမစ်ခ်ျတွေက လူဦးရေတွေ များလာတာ။
အန်းမစ်ခ်ျတွေက ပန်ဆယ်ဗေးနီးယား၊ ဒယ်လာဝဲယား၊ အိုဟိုင်းရိုး၊ အင်ဒီယားနား၊ နယူးယောက် ပြည်နယ်တွေမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျကျောင်းတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့စာအုပ်ကို ဒီမှာပုံနှိပ်ပြီး တနိုင်ငံလုံးက အန်းမစ်ခ်ျကျောင်းတွေဆီ ပို့ တယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံ Ontario ဖက်မှာလည်း အန်းမစ်ခ်ျတွေ ရှိတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျတွေဟာ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ဆက်ဆံမှုနည်းတော့ သူတို့ မျက်နှာလေးတွေမှာ ရိုးသားမှုကို အထင်းသား မြင်နေရတယ်။ အန်းမစ်ခ်ျတွေလည်း ကိုယ်တို့ လိုပဲ မက်ဒေါနယ်စားတယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားသူလေးက အီတလီရုံးမှာ ဝိုင်းနဲ့ အတူတူ လုပ်ခဲ့တာ။ ခု သူက ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ တာဝန်ကျတယ်။ နယူးယောက်က ယူအန်ရုံးကို လာရင် ဝိုင်းနဲ့ ဆုံကြတယ်။ ဝိုင်းက အန်းမစ်ခ်ျတွေအကြောင်း ပြောပြတော့ သူက အမေရိကားမှာ ဒီလိုခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့သူတွေ ရှိသေးတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ဝိုင်းကတော့ သူ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့သူပဲလေ ကိုယ်တို့ ကတော့ အန်းမစ်ခ်ျမလုပ်နိုင်တာ အသေအချာပဲ။
ခုလက်တလော အန်းမစ်ခ်ျ မိန်းကလေးတွေ ကြားထဲမှာ ဟစ်ဖြစ်နေတဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း
ကို်ယ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက မီးသွေးကို ထင်းရှုးချောင်းတွေနဲ့မီးမွှေးရတာ မီးသွေးက စိုနေရင် မီးခိုးသာအူပြီး မီးမစွဲ၊ အိုးမည်းမည်းကြီးတွေနဲ့ချက်ပြုတ်ရတာ သိပ်စိတ်ညစ်တာပဲ။ မြို့ လည်းရောက်ရော လျှပ်စစ်၊ ဂတ်စ်နဲ့ချက်ရတာကို သဘောကျလိုက်တာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို အဝတ်တွေကို လက်နဲ့ လျှော်ရတာများ လက်ကိုညောင်း။ ဟော ခုတော့ အဝတ်လျှော်စက်နဲ့လျှော်ရတာ ဘယ်လောက်သက်သာလည်း။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို တံမြက်စည်းလှည်း၊ ကြမ်းပြင်ကို ပြောင်အောင် အုန်းသီးခွံနဲ့တိုက်ရတယ်။ ဟော ခုတော့ ဖုန်စုပ်စက်နဲ့ ဆို ဘယ်လောက်သက်သာလိုက်သလဲ။ ကားမစီးတော့ အန်းမစ်ခ်ျတွေ ခရီးထွက်ကြမယ် မထင်ဘူး။ အင်းနော် ဘက်ဂီမြင်းလှည်းနဲ့ ဆို ဘယ်ခရီးတွင်ပါ့မလဲ။ အန်းမစ်ခ်ျတွေက နေတော့သာ ရိုးရိုးစင်းစင်းကြီး အစားအသောက်ကြတော့ ထိပ်တန်းဗျား။ ကိုယ်တော့ ဖီလာဒဲဖီးယား တောလားတုန်းက အန်းမစ်ခ်ျစာ စားခဲ့ဖူးတာ လျှာလည်သွားတော့တာပဲ။
အဲဒီက အမဲသားနဲ့အသီးအရွက်စွပ်ပြုတ်က ကိုယ်စားဖူးသမျှထဲမှာ အရသာအရှိဆုံးပဲ။ peach jam ၊ pickled တွေလည်း တကယ့် authentic ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အန်းမစ်ခ်ျတွေက ပိုးသတ်ဆေးသုံးတယ် အော်ဂင်းနစ် မဟုတ်ဘူး။ တောင်စဉ်တောင်တန်းလေးတွေနဲ့လန်ကက်စတာကောင်တီက တကယ်သာယာတယ်။ ရှမ်းပြည်ကလောအတိုင်းပဲ။ တိုးဂိုက်အန်တီကြီးကိုတော့ တကယ်ချီးကျူးတယ်။ နယူးယောက်ကို ပြန်တဲ့လမ်းမှာ ကိုယ်က အိပ်ငိုက်တယ် မနက်အစောကြီး ငါးနာရီခွဲ ထရတာကိုး။ နိုးရင် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ဂရိအကြောင်းတွေ ဝိုင်းကို မေးတယ်။ ဝိုင်း သွားလည်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေအကြောင်းကို သားရေတမြားမြားနဲ့နားထောင်တယ်။ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့ ည ၉ နာရီ ကျော်နေပြီ။ ကိုယ်စားဖူးတဲ့ ပန်းသီးတွေထဲမှာ ခြံထဲကနေ ကိုယ်တိုင်ခူးလာတဲ့ အဲဒီပန်းသီးတွေက အရသာအရှိဆုံးပဲ။ စတော်ဘယ်ရီ၊ ရက်စ်ဘယ်ရီလို ဗိုက်ထဲများများ ထည့်သယ်မလာနိုင်တာ နာသကွာ။
နံရံမှာ တခုခု အလှဆင်ထားရင် တခုခု အကြောင်းရှိလို့ တဲ့ အဲဒီအလှဆင်ပန်းက အပ်တွေ ထားဖို့ 
ဝုိုင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဆို သူ့ ခြံထဲမှာ ပန်းသီးတွေရှိတာ ဝိုင်းက ပန်းသီးသွားခူးတဲ့ခရီးဆိုလို့အံ့သြလို့ တဲ့။ မက်သရူးရေ မင်းက ခြံထဲဆင်းခူးရင်ရတဲ့ အရာတစ်ခုကို ဝိုင်းက ၄၀ အကုန်ခံပြီး တကူးတက သွားရတာ သိလား။ မက်သရူး ကံကောင်းတာကို မက်သရူး မသိပါဘူးတဲ့။ တရက်ခရီးဆိုပေမဲ့ ပရင့်စတန်တက္ကသိုလ်၊ ပန်းသီးခြံ၊ အန်းမစ်အိမ်တွေ ရောက်တော့ တော်တော်နှံ့ တယ်လို့ဆိုရမယ်။ ဆောင်းဦးရာသီမို့ရွက်ဝါလေးတွေ ကြွေပြီး ရာသီဥတုကလည်း သိသိသာသာ အေးမြလာပါပြီ။ နယူးယောက်အက်ဖ်စတိတ်၊ နယူးအင်္ဂလန်၊ မိန်း၊ ဗာမွန်ပြည်နယ်တွေရဲ့ဆောင်းဦးရာသီက အင်မတန်လှတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အောက်တိုဘာကုန်လောက်မှာ အဝါ၊ အနီ ရွက်ရောင်စုံတွေနဲ့အရမ်းလှတဲ့၊ မိုင်းနေထိုင်တဲ့ ဗာမွန်ပြည်နယ်ဖက်ကိုသွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ မိုင်း ဖိတ်ခေါ်လို့မဟုတ်ပါဘူး တိုးနဲ့သွားမှာပါ။
မိုင်းက မဖိတ်လို့စိတ်ပုပ်တယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ မိုင်း၊ ဆူနမ်၊ ရာမား တို့ ဆိုတာ ကိုယ့်ကို အမြဲကူညီစောင့်ရှောက်ကြတဲ့သူတွေ။ ကိုယ် ကျောင်းပြီးတော့ အိုးဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီနားက သူ့ ဆီလာဖို့ကားလက်မှတ်ဝယ်ပို့ ပေး၊ သူ့ ဆီမှာ နေထိုင်တဲ့ တလအတွင်း ကိုယ် စားစရိတ်ကို အကုန်ခံ၊ ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်ကို အင်တာဗျူးသွားတော့ ပိုက်ဆံတွေလက်ထဲ အတင်းထည့်ပေး၊ ကန်တက်ကီမှာ အလုပ်ရတော့ မင်းအိမ်က မတောင်းနဲ့ ဆိုပြီး ပို်က်ဆံကြိုထုတ်ပေး၊ ပိတ်ရက်တွေဆို သူတို့ ဆီလာဖို့ဖိတ်ခေါ်တော့ ကားမရှိဘူးကွ ဘယ်လိုလာရပါ့လို့ကိုယ်ညည်းရင် ဘတ်စ်ကားနဲ့လာပေါ့ကွ လာချင်ရင် အနီးလေးလို့ဖိတ်ခေါ်တတ်တဲ့ မိုင်းတစ်ယောက် ကျူဟိုင်း (မိုင်းက သူ့ ရည်းစားကို ကျူဟိုင်းလို့ခေါ်တယ် ဗီယက်နမ်လို အန်ကယ်လို့အဓိပ္ဗာယ်ရပါသတဲ့) နဲ့အိမ်ထောင်ပြုတော့ ဗာမွန်ပြည်နယ် ဗာလင်တန်ကို ပြောင်းသွားတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့ သတ္တဝါရှိတယ်လို့သတင်းကြီးတဲ့ ချန်ပိန်ရေကန်ကြီးဘေးနားက ဗာလင်တန်မြို့ လေးက အင်မတန် သာယာတယ်လို့မိုင်းက ကိုယ်တို့ ကို ပြောပြလေ့ရှိတယ်။
ဆေးရွက်ကြီး နံလို့ရိုက်ပြီးတာနဲ့ထွက်ပြေးရတယ် ဆေးရွက်ကြီးစိုက်တာ တော်တော်ပင်ပန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ကျူဟိုင်းက ပါရဂူဘွဲ့ ရ၊ သူ့ မိဘတွေက ယူအက်စ်မှာ နေတာလည်းကြာ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသား၊ အိမ်လည်း ဝယ်ထားတော့ မိုင်းက ကိုယ်တို့ အုပ်စုထဲမှာ အချမ်းသာဆုံး ။ My money is my money and my husband's money is aslo my money. လို့ လက်ခမောင်း ခတ်တတ်ပေမဲ့ ကျူဟိုင်းက နိုးဆိုရင် လုံးဝနိုးရတယ်တဲ့။ အမ်မလေး my husband's money is my money လိုက်စမ်းပါ နိုးဆိုလို့ ကတော့ လုံးဝ လုံးဝ နိုးစေရမယ်လို့ကိုယ်တို့ တွေက နောက်တတ်တယ်။ ကျောင်းမှာတုန်းက ဂင်္ဂါနဲ့ဟွားလဲ့ကို အိုးပါးလို့ ခေါ် ၊ ခီးနား ခီးနား တမီးမိုင်လိုင် မန်ပါချာလို့ဆူနမ်တို့ က ကိုယ့်ကိုသင်ပြီး အာဘီဆစ်ကို ပြောခိုင်း (ခီးနား ခီးနား တမီးမိုင်လိုင် မန်ပါချာဆိုတာ နီပါလီလို ဘာကြောင့် ဘာကြောင့် ငါ မင်းကို ချစ်တာလဲလို့အဓိပ္ဗာယ်ရပါသတဲ့) ၊ အမ်းထရူးကို သူယူ၊ ငါယူလို့ပစ်ပေးကြတဲ့ ဆူနမ်၊ ရာမားနဲ့ကိုယ်တို့ အကြောင်း သိလို့ နဲ့တူပါရဲ့ ။ ကျောင်းမှာတုန်းကလည်း မိုင်း ဖုန်းပြောပြီးရင် ကျူဟိုင်း ဘိုင့်ဘိုင်လို့ဆူနမ်နဲ့ ကိုယ်က အတင်းဝင်နှုတ်ဆက်တတ်တယ်။ အင်း ကိုယ်တို့ ကိုယ်တိုင်ကမှ အလည်ခေါ်ချင်စရာ မကောင်းတာ။ ဗာမွန်ကို သွားဖြစ်ခဲ့ရင် ဗာမွန်သွားတောလား ရေးတင်ပါဦးမယ်။
အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၄။
ဖီလာဒဲဖီးယားနဲ့အန်းမစ်ကောင်တီ အကြောင်းကတော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဟင်..ရေးထားခဲ့တဲ့ကွန်မန့် လည်းမတွေ့ တော့ပါလား။
ဒီဘလော့လေးကို ရောက်လာရင် ဗဟုသုတတွေ တစ်ထွေးတစ်ပိုက်ကြီးယူပြီး ပြန်သွားရလေ့ရှိတယ်။
ဒီကနေ့တော့ အချိန်ပိုလေးတွေရှိလို့ စန်းစန်းပို့စ် အတော်များများ လိုက်မွှေဖြစ်တယ်။ ကျေးဇူးတွေလဲ ထပ်တင်သွားပြီနော် .... ♥♥♥
မမအိုင်အိုရာ...ရှည်လို့၂ ပုိုင်း ခွဲလိုက်တာ မမအိုင်အိုရာ ပေးထားတဲ့ ကွန့် မန့် က အပိုင်း ၁ မှာ ...ကွန့် မန့် တွေဆိုတာ ဗိုက်တာမင် အားဆေးတွေလေ..ဘယ်ဖျက်ပစ်ပါ့မလဲ
တီတင့်...မအားတဲ့ကြားထဲက မကောင်းတဲ့ ကွန်နက်ရှင်းကို အံတုလို့ဘလော့ဂင်းနိုင်တာ ချီးကျူးသဗျား..အမေရိကန်လေသံနဲ့ ပြောရရင် You are most welcome. :D
ပန်းသီးတွေ ကြွေနေတာာကိုတွေ့တော့ ပစ်နှမြောလိုက်တာလေ..
အခုလိုအစစ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်မှာ အန်းမစ်ခ်ျ တွေရဲ့
နေထိုင်မှု့ ပုံစံကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့
သူတို့တွေအဲလိုနေတော့ လေ့လာစရာ လူမျိုး တခုတိုးတာပေါ့လေ..
အထွန်းရေ ပစ်တော့ ပုံထဲကအရာမှန်သမျှကို သဘောကျနေမိတော့တာဘဲ
အန်းမစ်ခ်ျ ကောင်မလေးတယောက်လောက်ကို ဓါတ်ပုံလေး ရိုက်ခဲ့တာ
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖုို့ကောင်းတဲ့ အန်းမစ်ရှ် အကြောင်း သိခွင့်ရလုိုက်လုို့ ကျေးဇူးပါ စန်းထွန်းရေ။ ခေတ်နောက်ဆွဲတယ်ဘဲ ပြောပြော သူတုို့ဘ၀က စိတ်ချမ်းသာဖုို့ ကောင်းလောက်တယ်။
ပန်းသီးတွေကလဲ စားချင့်စရာ။ စန်းထွန်းကြီးလဲ ခန့်မှခန့်။း)